China Cast Iron Double Disc Swing Check Valve orinasa sy mpamatsy |Dongsheng
3. Mifanatrika araka ny DIN3202K3, ANSI 125/150
5. Fitsapana: DIN3230, API598.
Ny asan'ny valva fisavana takelaka roa dia ny mamela ny mpanelanelana hivezivezy amin'ny lalana iray ary hisorohana ny fikorianan'ny lalana iray.Matetika io karazana valve io dia mandeha ho azy.Eo ambanin'ny fihetsiky ny tsindrin-tsakafo mikoriana amin'ny lalana iray, dia misokatra ny valva;rehefa mikoriana amin'ny lalana mifanohitra ny fluid, dia mihetsika eo amin'ny sezan'ny valva ny tsindrin'ny fluid sy ny kisendrasendran'ny valva, ka manapaka ny fikorianan'ny rano.
Endri-javatra ara-drafitra ny Wafer Butterfly Check Valve:
Ny halavan'ny rafitra dia fohy, ary ny halavan'ny rafitra dia 1/4 ka hatramin'ny 1/8 amin'ny valva fanaraha-maso flange nentim-paharazana;
Ny habe kely sy ny lanjany maivana, ny lanjany dia 1/4 ka hatramin'ny 1/20 amin'ny valva fanaraha-maso flange nentim-paharazana;
Mikatona haingana ny tadin'ny valva ary kely ny tsindry amin'ny maritoa;
Ny fantsona mitsivalana sy ny fantsona mitsangana dia azo ampiasaina, ary mety ny fametrahana azy;
Tsy voasakana ny fantsona fikorianan'ny rano ary kely ny fanoherana ny fluid;
Hetsika saropady sy famehezana tsara;
Fohy ny kapoka clack valve, ary kely ny herin'ny fanakatonana ny valve;
Ny rafitra ankapobeny, tsotra sy mirindra, endrika tsara tarehy;
Aina maharitra sy azo itokisana ambony.
Tsy hanao izay tratry ny herinay fotsiny izahay mba hanomezana vokatra sy serivisy tsara ho anao, fa vonona ihany koa handray ny soso-kevitra rehetra.
Ho an'ny OEM Dual Plate Check Valve Cast Iron Body miaraka amin'ny SS Disc, miarahaba anao.Ho faly izahay hanorina fifandraisana ara-barotra mahafinaritra miaraka aminao!
Professional OEM Dual Plate Check Valve, OEM Check Valve, Ny entanay dia tena malaza amin'ny teny, toa an'i Amerika Atsimo, Afrika, Azia sy ny sisa.Orinasa "mamorona vokatra kilasy voalohany" ho tanjona, ary miezaka ny manolotra mpanjifa amin'ny vahaolana avo lenta, manome kalitao avo-tsara aorian'ny varotra fanompoana sy ny fanohanana ara-teknika, ary ny mpanjifa ny tombontsoa iombonana, mamorona asa tsara kokoa sy ho avy!
2 Lohataona Inôksa
3 Disc SS316/SS304/WCB/C954
4 Peratra vy
5 Peratra seza NBR/EPDM/VITON
10 Sokiro vy
D (mm) 65 65 80 94 117 145 170 224 265 312 360 410 450 500 624 720
Φ (mm) PN10 92 107 127 142 162 192 218 273 328 378 438 489 532 585 690 800
teo aloha: Vavy vy tokana kapila swing check valve
Manaraka: Valve Diaphragm Rising Stem (mainty)